China Green Tea Chunmee 8147 umzi-mveliso kunye nabavelisi |Yibin Tea
Iti yemvula yaseTshayina, iti yemvula ekhutshwe kwiti yeChunmee esulungekileyo, ibalwa ngaphezu kwe-10% yeemveliso ze-Chunmee tea series.Imicu yeti egqityiweyo ithambile kwaye ixinene, inombala oluhlaza kunye neqabaka, ivumba elitsha nelingqindilili kunye nencasa epholileyo.
ukuqina, ngokuthe tye, ukumila kwamashiya
incasa enzima epholileyo, ehlaziyayo
Yintoni iTea eluhlaza yaseChunmee?
Iti eluhlaza yaseChunmee yeyona ti ivelisa kakhulu eTshayina.Ineemarike zokuthengisa ezizinzileyo, kwaye yeyona ti idumileyo kwihlabathi.
"Chunmee" isiTshayina esithetha "ishiya", ke yafumana igama layo kuba ishiya layo limile njengamagqabi omileyo.
Inzuzo yokusela iti ye-chunmee:
1. Ukunceda ukunciphisa ubunzima, ukunceda ukwetyisa;
2. I-Antisepsis kunye ne-anti-inflammation
3. Yehlisa iLipids yegazi kunye noxinzelelo.
4.Ukuhlaziya, ukukhulula uxinzelelo.anti-ukudinwa kunye njl.
Iimpawu zale ti yiphunga eliphezulu, i-bubble ecebileyo, i-taste eyomeleleyo kunye ne-mellow
Ungayibilisa iti ngeswekile kwimbiza yeti imizuzu emininzi okanye wongeze amagqabi e-mint ukwenza incasa ngcono.
Ngaba uyayazi iAlgeria?
IDemocratic People's Republic of Algeria, okanye "Algeria" ngokufutshane, lilizwe elikwiMaghreb kumantla eAfrika.Umda woLwandle lweMeditera ukuya emantla, iLibya kunye neTunisia ngasempuma, iNiger, iMali kunye neMauritania ukuya emazantsi-mpuma nakumazantsi, kunye neMorocco ngasentshona.IAlgeria inomhlaba omkhulu eAfrika, amazwe eMeditera kunye nama-Arabhu, kwaye ikwindawo ye-10 kwihlabathi.
Inani labantu base-Algeria li-42.2 yezigidi (2017).Uninzi lwama-Arabhu, lulandelwa ngamaBerber (malunga ne-20% yabantu bebonke).Iintlanga ezincinci yiMzabu kunye neTuareg.Ulwimi olusemthethweni sisiArabhu, kwaye isiFrentshi sisetyenziswa ngokuqhelekileyo.UbuSilamsi yinkolo yaseburhulumenteni.IAlgeria lelona lizwe likhulu elinesiFrentshi njengolwimi lwayo lokuqala lwasemzini.
Isikali soqoqosho lwaseAlgeria sikwindawo yesine e-Afrika.Ukutya kunye neemfuno zemihla ngemihla zixhomekeke ikakhulu kwizinto ezithengwa kumazwe angaphandle.
AmaSilamsi anempembelelo enkulu kwizithethe zabantu baseAlgeria.Inyanga yesiko lesithethe "iRamadan" ibhiyozelwa kwinyanga yesithoba yekhalenda yamaSilamsi minyaka le.
AmaSilamsi kufuneka athandaze izihlandlo ezihlanu kusasa, emini, emva kwemini, ngokuhlwa nasebusuku kwicala laseMecca.NgoLwesihlanu lusuku lwabo lonqulo, kwaye abantu baya kuya kwi-mosque kunqulo lweqela ngolu suku.
IAlgeria akufuneki isebenzise iihagu kunye nezilwanyana ezifana neehagu ezifana neepanda njengeepateni zentengiso.
Kweminye imimandla ekumazantsi eAlgeria, abantu banomdla okhethekileyo kwabamhlophe.Kuthiwa umhlophe unokubonakalisa ukukhanya kwaye uphephe ubushushu ukuze uvumelane nemozulu eshushu.Kwakhona kungenxa yokuba bagqala umhlophe njengophawu loxolo.
Abantu abakumgangatho ophezulu eAlgeria bathanda ukuthetha isiFrentshi.Ukuba undwendwe luthetha amagama ambalwa ngesiArabhu, umninimzi uya kuvuya.
E-Algeria, iti sisiselo sokwamkela iindwendwe, kwaye bayathanda ukusela iti eluhlaza.Xa umenywe kwikhaya laseAlgeria, kufuneka uphathele umamkeli-ndwendwe izipho.
Ukungeniswa kweti eAlgeria
Umthamo wokuthengwa kweti: 14,300 yeetoni (ngowama-2012, ibekwe kwindawo yesithathu ekuthengiseni kumazwe angaphandle iti eluhlaza eTshayina)
Ukupakishwa kweti eqhelekileyo: 85g sachet ukupakisha, 125g sachet ukupakisha
Iindidi zeti eluhlaza: iti yerhuluwa, iti yechunmee
Iinombolo zeti eziqhelekileyo: 3505, 41022, 9371
Ngaphambili: Iti eluhlaza iChunmee 9368
Okulandelayo: CTC 2 # iti emnyama
Iti eluhlaza iChunmee 41022AA
Iti eluhlaza iChunmee 4011
Iti eluhlaza iChunmee 3008
IJIKI CHUNMEE ITE